CMHL ပွဲမှာ Gfatt နဲ့ တွဲဖက်သီဆိုဖျော်ဖြေခဲ့တဲ့ အိမ့်ချစ်ရဲ့ ပုံရိပ်များ
8 Aug 2018 . 10:57 AM
ဂီတလောကမှာ ဖခင်ဖြစ်သူ ချစ်ကောင်းရဲ့ အမွေကိုဆက်ခံတဲ့ အဆိုတော်အိမ့်ချစ်ကတော့ ဖခင်ရဲ့ အရှိန်အ၀ါကြောင့်ပဲမဟုတ်ပဲ ပင်ကိုယ်အသံပါဝါကောင်းသူမို့လည်း ပရိသတ်အားပေးမှုတခဲနက်ရရှိထားပါတယ်။ လက်ရှိမှာ ကိုယ်ပိုင်သံစဉ်သီချင်းတွေနဲ့အတူ အောင်မြင်တဲ့ အဆိုတော်တစ်ဦးအဖြစ် ရပ်တည်နေတဲ့ အိမ့်ချစ်ဟာ သြဂုတ်လ(6)ရက်နေ့က CMHL Staff Party မှာ သွားရောက်ဖျော်ဖြေခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။
အိမ့်ချစ်ဟာ Gfatt နဲ့အတူ “မင်းသမီးနဲ့ကျွန်တော်” သီချင်းကို အတွဲညီညီသီဆိုခဲ့ကြပြီး City Mart ၊ Market Place နဲ့ Ocean ရဲ့ ၀န်ထမ်းပေါင်း(၇)ထောင်ကျော်ရှေ့မှာ ဖျော်ဖြေရတာမို့ ပျော်စရာကောင်းတဲ့အကြောင်းကိုလည်း သူမရဲ့ လူမှုကွန်ရက်မှာ ရေးသားမျှဝေထားပါတယ်။
သွက်လက်တဲ့အပြောအဆိုဟန်ပန်လေးတွေနဲ့အတူ ချစ်စရာကောင်းနေတဲ့ အိမ့်ချစ်ကတော့ “နေပြည်တော် CMHL Yangon ပွဲကြီးနှစ်ပွဲလုံးတော့ အောင်မြင်စွာ
ဝန်ထမ်း ၇၀၀၀ ကျော်ကို ဖျော်ဖြေပေးရတာ
နေပြည်တော် မော်လမြိုင် မန္တလေး ရေ Ready နော်.!”” လို့ ဆိုပါတယ်။
အိမ့်ချစ် ရဲ့ ဖျော်ဖြေပွဲပုံရိပ်တွေကို ပရိသတ်တွေကြည့်ရင်း အပျော်တွေကူးစက်မယ်လို့မျှောင်လင့်ပါတယ်။
Photos Credit – AyezawmoeSettmu,Eain Chit
CMHL ပှဲမှာ Gfatt နဲ့ တှဲဖကျသီဆိုဖြျောဖွခေဲ့တဲ့ အိမျ့ခဈြရဲ့ ပုံရိပျမြား
ဂီတလောကမှာ ဖခငျဖွဈသူ ခဈြကောငျးရဲ့ အမှကေိုဆကျခံတဲ့ အဆိုတျောအိမျ့ခဈြကတော့ ဖခငျရဲ့ အရှိနျအဝါကွောငျ့ပဲမဟုတျပဲ ပငျကိုယျအသံပါဝါကောငျးသူမို့လညျး ပရိသတျအားပေးမှုတခဲနကျရရှိထားပါတယျ။ လကျရှိမှာ ကိုယျပိုငျသံစဉျသီခငျြးတှနေဲ့အတူ အောငျမွငျတဲ့ အဆိုတျောတဈဦးအဖွဈ ရပျတညျနတေဲ့ အိမျ့ခဈြဟာ သွဂုတျလ(၇)ရကျနကေ့ CMHL Staff Party မှာ သှားရောကျဖြျောဖွခေဲ့တယျလို့သိရပါတယျ။
Gfatt and Eain Chit
အိမျ့ခဈြဟာ Gfatt နဲ့အတူ “မငျးသမီးနဲ့ကြှနျတျော” သီခငျြးကို အတှဲညီညီသီဆိုခဲ့ကွပွီး City Mart ၊ Market Place နဲ့ Ocean ရဲ့ ဝနျထမျးပေါငျး(၇)ထောငျကြျောရှမှေ့ာ ဖြျောဖွရေတာမို့ ပြျောစရာကောငျးတဲ့အကွောငျးကိုလညျး သူမရဲ့ လူမှုကှနျရကျမှာ ရေးသားမြှဝထေားပါတယျ။
သှကျလကျတဲ့အပွောအဆိုဟနျပနျလေးတှနေဲ့အတူ ခဈြစရာကောငျးနတေဲ့ အိမျ့ခဈြကတော့ “နပွေညျတျော CMHL Yangon ပှဲကွီးနှဈပှဲလုံးတော့ အောငျမွငျစှာ
ဝနျထမျး ၇၀၀၀ ကြျောကို ဖြျောဖွပေေးရတာ
နပွေညျတျော မျောလမွိုငျ မန်တလေး ရေ Ready နျော.!”” လို့ ဆိုပါတယျ။
အိမျ့ခဈြ ရဲ့ ဖြျောဖွပှေဲပုံရိပျတှကေို ပရိသတျတှကွေညျ့ရငျး အပြျောတှကေူးစကျမယျလို့မြှောငျလငျ့ပါတယျ။